Maitiro ekuvhara kukoshesa uye otomatiki kuratidzwa kweiyo iPhone kamera | IPhone nhau
Nzira yekukiya iyo Focus uye Auto Ratidziro yeiyo iPhone Kamera
Iyo iPhone kamera ndeimwe yeanonyanyo kufarirwa pasirese, sekumwe kutaura kunodaro, senge imwe yekupedzisira Ndira mune izvo zvakanzi iPhone 5 kamera yakadarika iyo Nixon mukuzivikanwa paFlickr, iro basa rekutora mifananidzo. Ndeya Yahoo! Haisi imwe yeanonyanya kufarirwa nekuti ndeimwe yeakanakisa pane ese, kwete. Iyo iPhone kamera yakagara ichisarudzwa nevashandisi nekuda kwekuti zviri nyore sei kushandisa uye nekuti iri kamera yakanyanyisa izvo zvinotibvumidza isu kutora mapfuti akanaka tisingazive chero chinhu nezvekutora mifananidzo mune chero mamiriro ezvinhu.
Kunyangwe zvakadaro, kuchine kumwe kugadziridzwa kwatinogona kupunyuka, sezvazvakaita nyaya ye auto yekutarisa uye yekuratidzira kukiya. Dzimwe nguva, isu tinogona kusarudza kuti iyo iPhone haina kuzvisarudzira pachayo poindi yekutarisa uye kuti yakawanda sei mwenje yekuunganidza. Semuenzaniso, pikicha yeboka inotorwa kwete kure kure uye uko boka risingamire kufamba. Izvo zvinokwanisika kuti pakadaro iyo iPhone haizive kwekutarisa, saka isu tichafanirwa kuzviratidza isu pachedu. Maitiro ari nyore, sezvaungaona pazasi.
Kune izvi isu tichafanirwa kuvharira iyo AE (Chirungu, Otomatiki Kuratidzira) uye AF (Chirungu, Otomatiki Focus). AE inogadzirisa huwandu hwechiedza hunopinda mu sensor uye iyo AF zviri nyore inodzivirira kutarisisa kubva pakuzvisarudzira pachayo pekugadzirisa. Zvese zvinhu zvakavharirwa panguva imwe chete uye kune izvi isu tichazofanira chete sarudza poindi patinoda kutarisa / kuunganidza mwenje uye tinya kwenguva inopfuura yechipiri. Isu tichaona kuti iyo mraba inogadzira vaviri vakasvetuka uye mureza we AE / AF kukiya.
Kana iyo kiyi yatove kushanda, haizofambe kunyangwe tikatamisa iyo iPhone. Padivi rerudyi rekwere isu tichaona a vertical line ine zuva rinoshandiswa kugadzirisa iyo ISO, iyo inoratidza huwandu hwechiedza kamera yedu inoda kutora mufananidzo. Kuti uchinje kukosha uku, ingo tsvedza chigunwe kumusoro kana pasi pane iyo iPhone skrini (haifanirwe kunge iri pane yezuva icon).
Ini ndoziva kuti vazhinji venyu maiziva hunyengeri uhu, asi kune vanhu vazhinji vaisazviziva uye ndezvevaya vashandisi kuti uyu mudiki anotungamirwa muromo uye vandinotarisira kuti ndakashandira nekubatsira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Nzira yekukiya iyo Focus uye Auto Ratidziro yeiyo iPhone Kamera
"Ndinoziva kuti vazhinji venyu munoziva hunyengeri uhu, asi kune vanhu vazhinji vanga vasingazvizive uye ndezve kune avo vashandisi izvo chidiki ichi chakanangiswa uye kune wandinovimba kuti chakavashandira nekuvabatsira."
Chaizvoizvo, vazhinji vakaita sevaya vanondisanganisira vaizviziva, uye zvirokwazvo 99% yeavo vanoshandisa iyo iPhone, kana zvirinani isu vedu vanowanzo shandisa iyo iPhone kamera zvakanyanya, taizviziva asi posvo rose haridiwe kune yakadaro zita, Chinyorwa ichocho chichava mhinduro: kusiya nzvimbo yaunoda kuti itarise; Uye kwete kutanga nekutaura kuti iyo iPhone kamera ndiyo imwe yeanonyanya kuzivikanwa pasirese ... zvakanaka, kune izvo isu takaunganidza mamwe matipi
Xavi Perez akadaro
Inonyanya kubatsira. Ndakanga ndisina zano !!! Merci !!!
Pindura kuna Xavi Perez
Gerardo TD akadaro
5 ndima !!! Sei vachiita kureba?!?!?? Chinhu chega chakakosha pane tambo mumba.
Pindura Gerardo TD
Windows 10, sisitimu nyowani yekushanda yeMicrosoft
IKEA Chitoro, chirongwa chakatora nguva yakareba kuti chisvike